नयाँ बर्ष मम्जार पार्कमा
नया बर्षमा नया जोश
नेपाली पात्रोअनुसार बैषाख २ गते २०६८ लागीसकेको थियो पहिलो दिनमा प्रवासमा डिउटीकोकारण दोश्रोदिन शुक्रवार केही नेपालीहरुको आग्रहमा पिकनिक जाने योजना भयो ।
योजना मुतावीक कविर बिहानको ९ बजे साथीहरुसंगको भेटपछि हामी अबुधावीदेखी दुबई तर्फ हुईकियौं । मरुभूमिको तापकक्रम कमै थियो निलो आकाश कालो वादलले ढाकिएको थियो बाहीरी मौशम चिसो थियो । लाग्थ्यो नेपाली नयाँ बर्ष बदलिएकोले यहाँको मौशम पनि बदलिन लागेको हो कि भन्ने ।
करिव ४५ जना नेपालीहरुको बीचमा ४ जना महिलाहरु पनी थिए आखा लोभी हो की मन मन पापी हो थाहा भएन तर नजर खाली त्यतै दौडन्थे प्रष्ट थाहा हुन्थ्यो प्रवासीको पिडा ति आँखा जुधाईबाट । अबुधावीको मुख्य शहरमा नेपाली लोकसंगीतलाई झल्काउने मादल घन्केको थियो बस भित्र भने मिठो नेपाली लोकगीत बजेको थियो माईकमा । बाहीरी वातावरण पनि हरियाली अनी आकाशपनी मडारीरहेको हुँदा नेपालकै कुनै ठाउँको यात्रामा
भय लाग्छ अचेल, देश हराको सुन्न पर्छ कि!
दौरा सुराल बिर्सी,धोती कुर्ता पो उन्न पर्छ कि!
ईतिहासको ब्याज सकियो,बर्तमान धितोमा छ
पराधिन भै कतै,स्वाभिमानै थुन्न पर्छ कि!
चन्द्र सुर्य लाजले झुक्यो गोर्खे खुकुरी भुत्ते छ
धुजा भो साँध सिमाना,सबै मिली तुन्न पर्छ कि!
माटो कस्ले चिन्यो र यहाँ,इमान बेच्ने गाउँमा
चोरलाइ चौतारी धेरै भो, शूली चुन्न पर्छ कि!
डिल्लीबजार बीच भागमा एउटा पुरानो बंगला किसिमको सेतो घर छ। त्यहाँ घर छेउको खोपामा गनेशजीको मन्दिर छ। बाहिर पटिट पर्खाल लगाइएको छ। तल पटि चार वटा कोठा छन। एउटा कोठा भित्र लामो स्टेचरमा सिरानी अग्लो हालेर सुति रहेको एक जीवित ब्याक्तित्व देखिनु भएको छ। स्टेचर बेडमा सुति रहेको अग्लो शिरानी हालेको खाना खाँदा छातीमा रुमाल बिछाइ बिस्तारै हातले खाने कोल्टे फेर्न पनि नसक्ने उठेर बस्न पनि नसक्ने। कही जादा पनि खाटैसंग बोकेर बाहिर कसैले लग्नु पर्ने। शारिरिक अबस्था अत्यन्त जटिल देखिन्छ। शिथिल थियो शरीर तर मन थियो बिजुली जस्तो जतातौ उज्यालो पार्ने।
डोटेली पुर्खा राजा देव िसंह बस्नेतका त्यस पछि बिग्रेडियर पहलमान सिहं बस्नेत त्यस पछि कर्नेल इमान िसंह बस्नेत हजुरबुवा वीर बहादुर बस्नेत बाबा कर्नेण इनद्र बहादुर बस्नेत र आमा बेद राज कुमारीको पवित्र कोखबाट खगेन्द्र बहादुर बस्नेत ज्युको जन्म वि।सं।१९८५ साल माघ ५ गते डिल्लीबजारमा सन् १९२९ जनवरी १८जन्मनु भएको थियो। ११ बर्षको उमेरमा आमाको देहान्त भयो र पछि सानी आमा कोमल
नया भने पछी हरेको कुरा नया लाग्छ। मान्छे त्यही,वाताबरण त्यही तर जब हामी क्यालेन्डरको पान्ना फेर्छौं हामी आफूलाई नया अनूभुती गर्छौं। र केही नया गर्ने प्रण गर्छौं।
घुमी फेरी फेरी नेपाली क्यालेन्डर फेर्न बेला आएको छ। यसै अबसरमा नया बर्ष को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। नया बर्षसंगै तपाईलाई पनि केही नया गर्ने जोश जागोस र सफलता पनि सोचेकै जस्तो मिलोस।
नयाँ बर्ष तिमी खुशीको अंकुर लिएर आउ
बेसुरमा छ रे देश एक शुर लिएर आउ
कतै छिटा रगतका, गन्ध कतै बारुदका
चाहिएन सुनको लंका कान्तिपुर लिएर आउ
पाइला पाइला हाबी भो, कपट निती यहाँ
सकुनीको बिगबिगी भो बिदुर लिएर आउ
घडा त्यो पापको भरिदा नि चुप भो जग
सेक्नु पर्‍यो पुर्पुरो पापीका उजुर लिएर आउ
स्वास फेर्नु मात्र
जिउदो हुनु हो भने
जनावर को जीवन स्तुत्य छ
आत्मबल बिना को मान्छे
नैतिकता हिन त्यो मान्छे
को जीवन को के अर्थ छ ?
स्वार्थ कै लागि
अनि मुल्यहिन प्रवृति सित
सम्झौता हुन्छ भने
जिउदो र मृतक मा के फरक ?